Kedu ihe na-ada na ihe ọkpụkpọ anyị? Nkebi nke 2 | Site na Linux
Kedu ihe na-ada na ihe ọkpụkpọ anyị? Nkebi nke 2
En ọzọ post Onye òtù ọlụlụ anyị Tina gwara anyị okwu maka otu egwu wee kpebie ime otu ihe ahụ maka egwu masịrị m.
Mgbe nile ndị na-agụ mara na nke m bụ metal, ma ewezuga igwe, ihe ọ masịrị m ike rock, egwu ufodu nu metal y metalcore (nke m na-atụleghị metal), na ọbụna Egwu China y japan, obu ezie na amachaghi m ihe banyere egwu a.
Mbụ m ga-amalite site na-ekwu banyere ụdị na-amasị m ndị kasị, ihe metal na-aga n'ihu:
Ọganihu metal bụ genre nke na-agwakọta igwe na ngwakọta na mgbanwe oge nke nkume na-aga n'ihu. Subrekere a weputara otu di iche iche Wardọ Aka ná Ntị o Crimson ebubeMgbe ahụ, a ga m ekwu maka ụfọdụ otu otu nke kacha amasị m.
1 Thelọ ihe nkiri Nrọ
2 Uche Okpukpe
3 Ihe egwu X
8 Arch Onye Iro
9 Ofmụ bodom
11 Anwụghị anwụ
14 Aterlọ ihe nkiri nke ọdachi
15 Ihe mkpuchi lacuna
17 Ọchịchịrị Moor
21 Ka M na-echi
22 Steve onye
24 Egwu ndị Japan
25 Egwu China
Thelọ ihe nkiri Nrọ
Thelọ ihe nkiri nrọ ahụ bụ otu igwe na-aga n'ihu site na US, na mbụ ọ nwere aha Majdị, mana ha gbanwere ya Dreamlọ ihe nkiri Nrọ.
Ọ bụ John Petrucci, John Myung na Mike Portnoy guzobere ya na 1985, ndị isi atọ mbụ ahụ nọgidere na otu ahụ ruo mgbe Mike Portnoy hapụrụ ìgwè ahụ, Mike Mangini nọchiri ya.
Uche Pagan bụ igwe na-aga n'ihu na-enwe mmetụta sitere n'ike sitere na Norway. E hiwere ya na 2000 site na otu Sliverspoon, n'otu afọ a ka ha wepụtara album mbụ ha, Infinity Divine.
O nwebeghị mgbanwe mgbanwe ebe ọ bụ na ọ na-ejigide mmadụ anọ n'ime mmadụ ise ndị mbụ ahụ, ebe ọ bụ na Jørn Viggo Lofstad nọchiri guitarist Thorstein Aaby.
Ihe egwu X
Symphony X bụ otu ìgwè nke na-aga n'ihu metal na mmetụta nke ike metal na neoclassical metal si USA. E hiwere ya na 1994 site Michael Romeo.
N'afọ ahụ, ha dere Symphony X, otu album mbụ nke otu ahụ na naanị otu onye na-abụ abụ Rod Tyler, onye Rusell Allen nọchiri.
Kamelot bụ otu igwe na-aga n'ihu nke nwere mmetụta sitere na igwe ike US na symphonic metal. Ọ na-ebilite na 1991 ekele Thomas Youngblood.
Na 1994, ha dekọtara Oge Ebighị Ebi na ihe nkiri Noise Records
Ugbu a, m ga-ekwu maka ya metal:
Ngwongwo Thrash bu ihe di omimi nke ihe eji eme ya na ike ike ya, otutu ndi ozo na-eji guita na ihe ndi ozo eji eme ihe, ebe obu na ha nwere otutu ihe.
Otu n'ime ndị ọsụ ụzọ n'ụdị a bụ Overkill, ọ bụ ezie na ndị kacha mara amara bụ Big 4: Metallica, megadeth, Slayer na Anthrax:
Pantera bụ otu igwe kpụrụ akụ sitere na US, n'agbanyeghị na ha bụ ọla glam ruo mgbe Ndị Ọchịchị Site na Hel. Ọ bụ ụmụnna Darrell Abott na Vinnie Paul Abott hiwere ya na 1981.
Ọ nọ na-arụ ọrụ ruo mgbe igbu mmadụ Dimebag Darrell na 2003 site n'aka onye ara ahụ bụ Nathan Gale.
Ọ dịghị mgbe ọ bụla bụ otu ọla na ihe ndị na-aga n'ihu na-abịa site na USA. A mụrụ ya na 1991 site na ntụ nke ebe nsọ ka a manyere ha imebi iwu.
Emeghi ka ejiri mara guitars 7-string. Ugbu a onye ọbụ abụ Warrel Dane bụ naanị onye mbụ so ya na Jim Sheppard.
Slayer bụ otu ndị amụrụ na US hibere na 1981 site n'aka Jeff Hanneman na Kerry King. Slayer nwere onye agbata obi ya elav y KZKG ^ Gaara, Dave Lombardo.
E boro ha ebubo na ha bụ Setan n'ihi isi okwu nke abụ ha.
Anyị na-aga metal ọnwụ metal:
Ngwongwo nke Melodic putara na Sweden ma choo ijikọta obi ojoo nke ihe onwu na ihe ndi ozo. Ebumnuche a na-eji olu guttural na mgbe ụfọdụ olu dị ọcha. Ndị ọsụ ụzọ bụ obi iru ala, na ọnụ ụzọ na na ọkụ ruo mgbe album Clayman ha.
Arch Onye Iro
Arch Enemy bụ otu ndị na-egbu ọnwụ nke sitere na Sweden na otu n'ime ìgwè ole na ole n'ụwa na-eji ụda olu nwanyị.
Ọ hiwere na 1996 site Michael Amott na Johan Liiva. Johan Liiva duuru ya ruo 2001 mgbe ọ pụrụ ma Angela Gossow nọchiri ya.
Ofmụaka Bodom bụ Finnish melodic metal metal otu nwere mmetụta sitere na ike igwe, ọ malitere na 1993 site Alexi Laiho na Jaska Raatikainen.
Na mbu akpọrọ ha Inearthed, na mgbe aha gbanwere Janne Wirman sonyeere ndi otu.
Aha otu a sitere na igbu ọchụ na Lake Bodom na 60s.
Anyị na-aga oke na-amalite na ọla ọnwụ:
Metal ọnwụ na-erite site thrash metal. Ihe eji mara ya bu olu ndi mmadu, olu oku nwere olu di ala, ya na otutu egwu.
A malitere ịmepụta otu a na otu ìgwè nwere, nke malitere iji ụda guttural.
Ọnwụ bụ otu ndị ọsụ ụzọ na metal ọnwụ, nke Chuck Schuldiner hiwere na US na 1983 ma na-arụ ọrụ ruo 2001. Ọnwụ ya gbagburu site na ọnwụ nke Chuck Schuldiner n'ihi oyi baa na-emetụta glioma.
N'ime ọnwụ metal ikekwe n'uche m ha kacha mma.
More gabiga ókè, na nwa ojii:
Black metal bụ oké katọrọ subgenre n'ihi na ya e ji mara mgbochi Christian lyrics na Ne gburugburu. Ọ bụ ụdị dị iche iche nke na-eji ụbọ akwara ngwa ngwa, olu akpịrị na ngwa ngwa ngwa ngwa. O bilitere na Norway.
Agaghị m achọ ụdị aghụghọ a nke ukwuu, mana enwere m ike ịnapụta otu ya.
Anwụghị anwụ bụ ndị otu ndị ojii ojii ojii Norway hibere na 1990 site n'aka Abbath, Armagedda na Demonaz. A naghị ele ha anya dị ka ekwensu n'adịghị ka ọtụtụ igwe ojii ojii, ebe ọ bụ na abụ ndị na-adịghị anwụ anwụ na-abụkarị oge oyi.
O sitere na mgbọrọgwụ nke otu Ngwuputa.
Anyị ga-akwa iko ojii ka ... symphonic nwa metal:
Black Symphonic black metal na-agbakwunye n'iji olu dị ọcha na ọla ọcha dị ọcha, dịka ịgbakwunye kiiboodu na ọbụna ezigbo ụlọ ọrụ
Dimmu Borgir bu onye otu symphonic nke ndi Norwegian hibere nke Shagrath, Silenoz na Tjodalv hiwere na 1993.
A na-akatọ ha ebe niile maka gbanwee ụdị ha maka ihe ọkụ ọkụ. Dimmu Borgir pụtara ebe ewusiri ike na Norwegian.
Maka m, Dimmu Borgir bụ symphonic metal nke nwere olu ọla ojii na onyo ojii, ọ dịghị ihe ọzọ. N'ime otu a naanị album 4 na-amasị m, ndị Euphoric Euphoric Misanthropia, na nke symphonic mpịakọta dị obere karịa na ndị ọzọ na ndekọ, na Akụkụ Ime Mmụọ, Ọzọkwa, e nwere obere symphonies na m ga-asị na ọ dị njọ karịa nke gara aga a kpọtụrụ aha, ndị Na Sorte Diaboli , ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ enwereghị ikuku na Na-achọ Ọchịchịrị Na-emeri, nke dịkwa oke, ọ bụ ezie na ọ nwere akụkụ ndị ọzọ dị egwu, enwere ike iwere ndị a dị ka ọla ojii, ọ bụ ezie na ọ bụghị dị ọcha, mana symphonic.
N'agbanyeghị nke ahụ ọ dị ka otu ezigbo igwe symphonic m.
Ma ebe ọ bụ na ọ bụghị ihe niile bụ obi ọjọọ, anyị ga-ekwu okwu banyere ọzọ subgenre, na ọla gothic:
Ngwongwo Gothic bu ihe eji eme ka eji olu nwanyi di ocha na olu nwoke, nke puru idi ocha ma obu guttural. Isiokwu nke okwu abụ na-abụkarị nwute ma ọ bụ ịhụnanya.
Agaghị m achọkwa ụdị aghụghọ a, mana m nwere ike ịnapụta ọba na ụfọdụ egwu
Sirenia bụ otu ndị gothic metal na Norwegian guzobere na 2001 site n'aka Morten Veland. Emebere ya site na mwepụ nke Morten Veland na Tristania, ndị otu ya gara aga.
Ejiri Sirenia nwee onye ọbụ abụ dị iche iche na ọba ọ bụla ruo mgbe Ailyn banyere kpamkpam.
Ihe ndekọ ndị m napụtara n'aka obere ihe m nụrụ banyere Sirenia bụ Ala nke 13, Elixir maka ịdị adị na Enigma nke Ndụ.
Aterlọ ihe nkiri nke ọdachi
Aterlọ ihe nkiri nke ọdachi bụ òtù ndị gothic na-arụ ọrụ na Norwegian guzobere na 1993. Ha gbasara na 2010 mgbe afọ 17 gasịrị ka onye ọ bụla nwee ike ibi ndụ ha.
Emebere ya site na ọpụpụ nke Hein Frode Hansen si otu Phobia.
Si ebe a m na-azọpụta abụ ahụ Cassandra, ọ bụ ezie na amaghị m ìgwè ahụ.
Ihe mkpuchi lacuna
Lacuna Coil bụ otu ndị gothic ọlaọcha ndị Italy nke Marco Coti Zelati na Andrea Ferro guzobere n'okpuru aha ụra nke aka nri, emesia edegharịrị ha Ethereal na mgbe ewerela ya, ha gbanwere aha ahụ Lacuna Coil, nke pụtara Ntugharị efu.
Si ebe a na-anapụta m Gaa n'ọchịchịrị y Eluigwe A iegha.
Ka anyị gaa na ihe dị jụụ, ndị metal symphonic
Dị ka aha ya na-egosi symphonic metal na-agbakwunye orchestral na metal na epic choruses, ọtụtụ oge ìgwè ndị a esorola egwu egwu egwu.
Ebe ọ bụ na mpịakọta symphonic abụghị nke m, azọpụtara m ụfọdụ egwu
Epica bụ symphonic metal otu nwere gothic metụrụ na Holland.
Mark Jansen guzobere ya n’aha Sahara Dust, nke mechara gbanwee ya ka ọ bụrụ Epica.
Ka anyị gaa na dragọn ahụ na akụkọ ahụ, ndị ike metal:
A na-eji ike ọsọ ya mara ọsọ ya na usoro ya, ma na keyboard na guitar. Ọ nwere njirimara eji eji bass eji rụọ ọrụ ya abụọ na-adabere na epic ihe na akụkọ ihe mere eme
Ọ bụ ụdị ọzọ na-adabaghị m kama ana m anapụta otu ọzọ
Ọchịchịrị Moor bụ otu igwe igwe ike nwere symphonic na neoclassical metụrụ na Spain. Ọ bụ Enrik Garcia hiwere ya na 1993.
Albọm kachasị ọhụrụ na-enwe obere ọganiihu na-elegharaghị ike igwe ike.
Ugbu a, anyị ga-ekwu okwu banyere ahụkarị, ndị arọ metal:
Ngwá dị arọ bụ ụdị egwu na-esite na nkume siri ike ma na-agụnyekwa ụdị nke ụdị ndị ọzọ dị ka acha anụnụ anụnụ, psychedelic rock, wdg.
Ọ malitere na ngwụsị afọ 60 na Black Sabbath.
Dika ihe omuma a abughi nke m, anyi gha ekwu okwu banyere otu ndi kachasi m nma n'ime ya
Dio bụ otu igwe dị egwu nke Ronnie James Dio hiwere mgbe ọ pụtara na Black Sabbath. Ọ na-agbaze n'ihi ọnwụ ya site na ọrịa kansa afọ.
Na mkpuchi nke album Holy Driver anyị nwere ike ịhụ mpi igwe ahụ, nke yiri ka ọ bụ emume nne nne ya na-eji achụpụ mmụọ.
Anyị na-aga ọla glam:
Glam metal bu udiri ejiri mara ya. Egwu a gbasara mmekọahụ, ọgwụ ọjọọ, wdg. N'ihi ihe oyiyi ahụ na ụda ya yiri nke nkume siri ike, ọtụtụ anaghị ewere ya dị ka ọla, mana m na-ewere ya.
Mötley Crüe bụ otu igwe glam si USA. Ọ bụ Tommy Lee na Nikki Sixx guzobere ya. O nweela ọtụtụ mgbanwe usoro mana ugbu a akara mbụ na-arụ ọrụ.
Aha ahụ sitere na gbanwere aha biya ha drankụrụ.
Mana ọbụghị ihe niile bụ igwe, yabụ ka anyị kwuo maka otu egwu egwu abụọ:
Slipknot bụ nu metal otu guzobere na Iowa na 1995. O nwere ihe kacha mma nke ndị otu 9 na otu ahụ.
A na-eji otu ihe nkpuchi eme ihe n'oge a.
Si ebe a na-anapụta m Tupu m chefuo, soso abu m masiri nu metal.
Dika m na-ekwu na mbu, echeghi m metal metal, kama o bu rap ya na guita ndi agbaghariri agbagoro na ala ndi ozo (Slipknot na-eme ha B). N'ihi na RAP mmetụta, ojiji nke n'omume na dj si, ọtụtụ ndị na-adịghị atụle nu metal metal, m gụnyere onwe m.
Ka M na-echi
As I Lay Dying is a US metalcore group guzobere na 2000. Tim Lambesis guzobere ya mgbe ọ hapụrụ Society's Finest.
Ejikọtara ya dịka otu na 2001.
Si ebe a anyị na-anapụta N'ime Mbibi, naanị egwu na-amasị m site na metalcore, ọ bụ ezie na ọ bụ karịa trashera.
Anaghị m atụle metalcore metal n'ihi na ọ bụ ihe metụtara hardcore punk karịa metal, ma e wezụga eziokwu na ọ na-eji olu ákwá. Gendị ahụ bụ onyinyo dị ọcha na egwu azụmahịa, emere naanị ma ree ya.
Ka anyị gaa n'ihu nkume siri ike:
Steve Vai bụ onye ụbọ akwara si USA, ụdị ya ga-akọwa ya dịka okwute siri ike na teknụzụ.
Ọ bụ onye mepụtara usoro Floyd Rose nke megidere bọmbụ na-agba agba, ya bụ, kama ịtọghe ụdọ ahụ, anyị ga-eme ka ha sie ike (enweghị m ike icheta aha usoro ahụ).
Ọ bụ nwa akwụkwọ nke Joe Satriani
Van Halen bụ otu nnukwu nkume siri ike nke USA nke Eddie Van Halen na Alex Van Halen hiwere.
Na mbu akpọrọ ha Mammoth ma n'ihi na otu ọzọ na-eji ya agbanwere Van Halen.
Guitarist Eddie Van Halen bụ onye na-echepụta bọmbụ na-agba agba, mkpịsị aka mkpịsị aka, na ịpị aka.
Kwuo banyere ihe ọzọ
Egwu ndị Japan
Egwuregwu pentatonic na ụda enigmatic na-egosi egwu Japanese.
Ngwa akụrụngwa eji egwu ndị Japan bụ shamisen, koto, shakuhachi na taiko.
Ọtụtụ n'ime ngwa ọrụ ndị a bụ ndị si China wee bute ya agbanweela ka ha wee bụrụ ihe a na-ahụkarị
Dị ka ndị Japan, ọ na-eji akpịrịkpa pentantọnị ma ọ bụghị otu
Ngwa akụrụngwa ejiri bụ gong, ọkpọkọ, xiao na sanxian.
M na-ahapụ ọtụtụ ìgwè na pipeline dị ka onye anyị na Tina na-akpakọrịta, ma ọ bụrụ na ọ bụghị na post ga-adị ogologo na-agwụ ike
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ndị ọzọ » Kedu ihe na-ada na ihe ọkpụkpọ anyị? Nkebi nke 2
Na na naa, m na-atụ anya na nke a anaghị atụgharị <° Music 😛
Echefuru m ikwu na echiche ndị posers nu metalheads anaghị agụta
Ha, m mma inye gị azịza okwu gị na-ewe ...
Ee, ọ ka mma n’ihi na ha ga-abụ mkparị gbasara ihe na - abụghị ọla ma ọ bụ chetara gị nkata ahụ
Ihe kachasị mma ebe a bụ ọnwụ ga-abụkwa ọnwụ.
A hapụrụ m onyonyo nke mepee post ahụ na otu banki m anụbeghị oO
Ha nụbeghị ihe mgbu nke Nzọpụta ma ọ bụ Osimiri?
Ọ bụ ezie na nke mbụ m chere na ọ dịtụ arọ karị ige ntị, na nke abụọ bụ ntakịrị karịa prog, ha abụọ yiri ka ọ bụ ezigbo ndị agha.
M na-atụ aro ị listeninga ntị n'ìgwè nke ogologo oge tisasịworo: Nrọ nke Sanity
Riverside amaghim ma mgbu nke nzoputa amaghi m
Na foto nke meghere post ahụ, n'ihi na anaghị m achọ igwe ike mana ọ dị m mma, agbanyeghị na enwere ike ghara iwepụ ihe ochie na anya ọkụ.
M ga-ahọrọ Veronica Freeman si Benedictum xP dị ka ihe oyiyi nke post http://4.bp.blogspot.com/_7Fpi7vU7XY4/TIHnzi6O6RI/AAAAAAAABqs/0TzwGcp6jec/s640/veronica_benedictum1.jpg
Haha lee, unu nile ruru unyi
Ee ee, mana kweta na ọ dị mma 😛 xD
Sacrilego… ..chefuru ACDC
Enweghị m mmasị na nkume
Ahụrụ m na ị nwere ike inwe mmasị na listi ọkpụkpọ ụfọdụ nke m nwere na Grooveshark. M na-eji ha eme ihe mmemme ... na dika Juan Carlos si kwuo ... ị chefuru AC / DC.
Rock & Metal na-ekpuchi (N'okpuru Udo)
Ọ ka na-ewu, yabụ natara ndụmọdụ. Echiche bụ itinye mkpuchi na-ada ụda otu ma ọ bụ ka mma karịa ụdị nke mbụ.
Rock & Metal All Nite (ỌH )R)) *
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịge ntị n'ihe niile ... nke a bụ nchịkọta nke ndepụta ndị gara aga niile.
M na-ezute: Rock / HardRock / Glam / Symphonic / Ghotic / Heavy / Speed ​​/ Power / Death / Rome / Thrash / Black / Folk
Ngwongwo ojoo ya nile
Naanị aha ya ka aha ya bụ Ọjọọ Niile! Na Ngwongwo Ọjọọ Niile! ịchọta ya n'ụzọ dị mfe na #Grooveshark.
Ihe omuma nke ndi mo ojo ka di otu:
Ọnwụ / Mbibi / Thrash / Black / Ndiife
E wepụrụ ọtụtụ abụ sitere na Rock na 80's
Nọrọ: Symphonic / Ghotic / Heavy / Speed ​​/ Power / Death / Rome / Thrash / Black / Folk
Nkume & Eke Ochie!
E degharịrị aha ya na Rock & Metal Classics ka Rock & Heavy Classics
Wepu isiokwu di iche iche site na Speed ​​na Thrashudos
Nọrọ: Rock / HardRock / Glam / Heavy
Daalụ maka ndepụta n'ihi ọtụtụ nwere ike inwe mmasị.
Ihe AC / DC, achoghi m ya n'anya n'ihi na adighi m acho nkume na obere AC / DC
Aga m agbakwunye Tristania, Ozzy Osborurne, POD, KISS, Creed, Korn, AC / DC, Abọ ọbọ asaa, White Snake, Riverside, Elane, Arkona (ndị Russia), Origa, Ilaria Graziano, Elfonia, Eluvietie, Galneryus, Pool Water, Ndị na-alụ ọgụ Foo, Killswitch Soro ... na nkenke, ndepụta dị ogologo iji nọgide na-ede.
Mba, mba, ka anyị lee.
Ana m ekwupụta n'ụzọ doro anya na post na achọghị m metal na metalcore. Mgbe ahụ gothic adịghị adabara m nke ukwuu, naanị obere ihe.
Ma AC / DC, achọghị m, enweghị m mmasị na nkume na obere AC / DC
Ọfọn, na ndepụta ahụ enwere ihe niile.
Dịka ọmụmaatụ, Arkona bụ Metal Metal, Ozzy bụ metal dị arọ, Origa bụ onye olu olu olu Russia nke na-agụ na Russian, Japanese, English na Latin, yabụ ị ga-ahọrọ.
Mba, ma gbasara nu na metalcore naanị otu egwu ka m chọrọ, nke ahụ apụtaghị na otu na-amasị m ma ọ bụ ụdị ahụ.
Ozzy anubeghi m, anurula m nke Black Sabbath, nke m chokwara, ma Dio ka nma m.
Egwú ndị Japan na China na-ahọrọ egwu akụrụngwa, karịa nke nwere olu
Ma ngalaba igwe dị ike ka dị mkpụmkpụ maka m, ma anyị hapụrụ ndị agha nke ogologo nke Stratovarius, Sonata Arctica, Gamma Ray, Helloween, Rhapsody ma ọ bụ Dragonland na inkwell ... na na Ọnwụ ngalaba achọpụtara m. enweghị Amon Amarth, yana Kreator na Thrash, ma ọ bụ White Rata na Scorpions na Hard Rock ... xD enweghị mgbaghara
Achọghị m ike igwe ma e wezụga maka Dark Moor.
Ihe m tinyere bụ ndị otu masịrị m na otu anyị nwere ike isi chekwaa ihe.
Amon Amarth amachaghị ha na akpị m na-eme, mana adabaghị m itinye ha
Epica na Tarja Turunen rlz !!
Ọfọn, eziokwu bụ, etinyewo m foto nke Tarja Turunen n'ihi na echere m na ọ mara mma, n'ihi na igwe ike adịghị m mma.
Mgbe ahụ ha na-ekwu na enweghị m mmasị ụmụ agbọghọ na ndị ọzọ, ị ghaara iji uru hahaha
hehehe, na ikpe Simone Simons bụ cuter 😉
Ọ bụ nwanyị na-acha uhie uhie ochie na anya na-acha anụnụ anụnụ, ma ọ dịkarịa ala Tarja bụ ụda, na n'ime ihe dabara ...
N’agbanyeghi na Simone adighi nma
Simone mara mma mana ọ naghị amasị m, ọ na-eme m ihe aka.
Otu nke m hụrụ n'anya bụ Cristina Scabbia, onye na-agụ ụda Lacuna Coil. Italiantali ahụ bụ ihe mara mma ...
Haha nwekwara n'ezie
Ma ... Nightwish bu Symphonic Metal karia ike igwe ...
Metal Symphonic Ike
Iji kwuo na Nightwish / Tarja, Tarja / Tarja bụ Power Metal, bụ ịsị na naanị Ubuntu bụ Linux.
Ọfọn, ọ na-eme m ike igwe, gee Kinslayer ma ọ bụ Wishmaster iji hụ ma ọ bụ igwe ike ma ọ bụ na ọ bụghị.
Gba na abụ olu ụtọ bụ ọla ike, symphonic, mana ike ike
M ka na-ekwenyeghi, na enwere ụfọdụ ngwa ngwa apụtaghị na ụdị ha bụ Power Metal. Enweghi otutu bass okpukpu abuo, ma obu ngwa ngwa guitar ngwa ngwa, ma obu ihe ndi ozo ... jiri ya tụnyere Rhapsody, na Dragonland, ma obu na Helloween, ma gwa m otu uzo Nightwish si di ka nke ha.
Fuck abụghị ike dị ọcha ọbụnadị n'ime symphonic, mana obere ike nwere
Hahaha… kpomkwem. Simone dị ka mannequin ma ọ bụ mpempe akwụkwọ poselin. Kedu ka esi hu ma ghara imetu aka ... hahaha
Ihe na-adịghị m mma bụ afọ ya (ochie), ntutu isi ya na anya ya hahaha
Site na egwu Japo m kwadoro otu ndị na-akụ egwu na-akpọ Kodo
Agam a lee ya anya, daalụ
Ana m akwado ndị Japan egwu Tokyo Ska Paradise Orchestra! xD
Ama m ihe ị ga-ekwu, mana ọ bụ ihe ọchị! Ya mere, ana m ahakwa uto m ebe a xD
AKWOLKW and AKW andKW and NA AKWIGHTKWỌ 🙂
Van Halen na Motley Crue n'akụkụ Immortal na Dimmu? Lee ngwakọta dị iche!… XD
N'ime ndị agha ị kpọtụrụ aha m na-aga Lacuna Coil, Kamelot, Theater of Tragedy; na ihe, Sirenia na Epica. Ndị ọzọ anaghị aga ma ọ bụ bịakwute m, n'ihe banyere Nrọ, enweghị m ike iguzo oke ịdị mma ya na nghọta na-enweghị isi ...
N'aka nke ọzọ, echeghị m na ị ga-aga DJ na-edepụta nu metal bands - nke na-abụghị "metal" maka gị -, ma ọ bụ otu abụ nke ụdị ahụ, ọkachasị mgbe ọ dị gị ka ọ bụ "ezigbo Taliban", mana hey, nke a bụ "A nabatara m", yabụ enweghị ihe mere.
Naanị m na-achọ tupu m chefuo ihe niile nu, n'ihi na anaghị m amasị ụdị aghụghọ ahụ ọ bụla, ọ bụ guit na rap.
Gaa tinye dj n'ime otu ekwere na ha bụ igwe ... ¬¬
Na site na Dimmu naanị album ahụ, n'ihi na ọ bụghị na ha dị m ka ọ
Nwoke, naanị ihe ị na-achọ bụ egwu nke otu ụdị na ọba site na otu egwu, ọ ka mma ịghara ịgụnye ha ma depụta otu ndị ọzọ ị masịrị gị karịa ... M na-ekwu, ọ bụ eziokwu?
Ọ dị mma… Ee, mana achọrọ m ịgụnye ọtụtụ, ebe m mere ya, emere m ya ka ọ zuo oke (na m na ndị na-eme ihe dị mma na KZKG ^ Gaara haha). Fọdụ achọghị itinye ya iji zere ire ọkụ n'etiti ìgwè abụọ.
na symphonic rock, nke kachasị m mma, ị hapụghị ikwupụta n'ime Ọnwụnwa
Anụbeghị m ha, ọ dị m ka ọ bụ naanị abụ, ọ bụ ezie na ha dị ka ọla goth
+1! M asọpụrụ Chineke n'ime Ọnwụnwa * - *
+ 1… ha bụ ọkacha mmasị m ìgwè !!!! ihe omumu ohuru ya, "The Unforgiving", di uku !!!!
N'ezie enwere m mmasị ụda ha nwere na mbụ, na CD mbụ ha ntakịrị karịa ... ugbu a enwere m ụdị ịhụ ha azụmahịa haha. Ma, ihe ha na-eme ugbu a now
Site na ihe ị tinyere, anyị dabara na ụfọdụ ndị agha, dịka ọmụmaatụ:
- Thelọ ihe nkiri Nrọ
M na-ege ntị na ọla ojii, ihe ndị dị ka:
Anwụ anwụ na Dimmu borgir, Ọ dịkwaghị ka ọ na-agwụ ike nye m, ugbu a ana m etinye aka na insductrial na-aga n'ihu, teknụzụ teknụzụ, NeoProg, nkume psychedelic na-aga n'ihu na ihe ndị dị otú ahụ.
Obi ike, ana m akwado Meshuggah, Cynic, Aghora, Altera Enigma (ha bụ ndị China na-eme progressivo), Blotted Science (ị ga-enye ha oge siri ike), Exivios, Kiko laureiro, Porcupine Three, Ocenazice, Riverside .. ufff ugbu a bụ ihe Enwere ezigbo ìgwè .. M na-achọkarị ịchọta ihe ọhụrụ ma hụ ihe m nwetara.
Ọma nye ya ekele 😉
Agora Enwere m ha edepụtara na ndepụta dị ebe ahụ. Meshuggah… A na-ekwu maka ha maka ụda eriri 8-string. Na Kiko Loureiro ... ọ bụ ike, nke anaghị adabara m
ee meshuggah 8 ndọtị .. e nwekwara anụmanụ dị ka ndị ndu 8 ndoro oke ma ha na-instrumental .. m na uche m na-amasị ụmụ anụmanụ dị ka ndị isi ndị ọzọ onye a video nke Ihọd onye na-egwu egwu 8 eriri guitar «Tosin Abasi»
Rusty Cooley na-egwuri egwu ha, ọkachasị nke Dean na EMG 808 pickups
Nọrọ n'ụlọ Kiko Loureiro! i hapuola Angra !! xD
Achọghị m ike igwe
Bịa na enyi, emela ka ike gwụ gị ma hapụ ndị ọzọ ka ha kwuo okwu ha ... Site n'ụzọ, mezie ihe egwu ị na-ekwu na ị gosipụtara XD ...
Ee, emezigoro m ụfọdụ
Onweghị ihe na - eme na ha na - eche, na amaara m na o nweghị onye m riri
Lee otu otu dị iche iche !! E wezụga egwu ndị Japan na nke China, nke na-enweghị m mma, enwere m ụfọdụ ụfọdụ maka ndepụta m. 🙂
WTF !!!! Ihe niile ndị a na-amasị m !!!! Kedụ nnukwu uto egwu ị nwere 😛 Agaghị m ama nke m ga-anọnyere hehehe… ọzọ, egekwala onye isi nkwọcha nke @elav ntị na ihe ọ nụrụ bụ shittoons na Beatles ka ọ bụrụ hehehe, ogologo ndụ Metal !! !!! X)
Ihe ya masịrị m Nkume na mpịakọta ke ofụri ofụri, ma m nwute na-ekwu na e nwere ole na ole dị iche iche na m maara ma ọ bụ nụrụ site ndị ahụ e kwuru n'elu. Nke mbu, obu eziokwu na abughi m onye na udiri udiri udiri a na-ege nti ihe obula. Enwere m ike ịge egwu Pantera, ma ọ bụ abụọ, mana oge nke atọ enwerelarị m isi ọwụwa. Guitarda guitar na ịgbà na-ada mgbe niile na-abịa n'oge ọ na-ewute m. Ọzọkwa, gịnị banyere hel nke okwu ha na-egosi?
Ọ masịrị m ebe egwu na-agakọta ọnụ kwekọrọ n’olu onye ọbụ abụ (ma ọ bụrụ na ụdaume dị). Ọmasị nke Nirvana, AC DC, Weezer, Remy Zero, VonRay, LifeHouse, Audioslave na-amasị m, inye ihe atụ ndị dị ugbu a, mana m na-ahọrọ (na nke dị anya) otu ma ọ bụ ndị ọbụ abụ n'oge gara aga dịka: Elvis, Supertramp, The Beatles, Aerosmith , Chicago, Chevelle, Dire Straits, REM, Eagles, Electric Light Orchestra, Guns N 'Roses, Alice Copper, Foreigner, Pink Floyd, The Rolling Stones, Onye, na ogologo wdg, egwu a na-anụ naanị site na carcamales dị ka m. 😛
Otu ụdị egwu kachasị amasị m bụ:
- Bad & Mkpụrụ obi
- Ọgbọ ọhụụ
- Zuo ike
- Njem iwuli elu
Ọbụna ụdị ndị ọzọ dị na Caribbean dị ka Reggae (Bob Marley), La Trova (ọtụtụ ndị Cuban), Alternative Fusion (X Alfonso) .. Mana m na-ege ntị n'ihe niile, ọ bụrụhaala na ọ masịrị m onwe m, ọ nwere ụda, nkwekọ ma na-eziga ụfọdụ ụdị ihe mmetụta ma egwu ma ọ bụ okwu egwu a.
Kedu ihe egwu okwu gị na-egosi?
Bịanụ, atụfula m na nke a, ọkachasị ịbụ reggaeton dị ka gị.
Lelee ntụgharị Cementery Gates iji hụ ma ọ na-enye ihe ma ọ bụ na ọ bụghị:
Ọ bụrụ na ị ga-ekwu ụdị okwu ahụ, opekata mpe ihe akaebe dị ugbu a, ma jụọ ihe abụ reggaeton na-egosi?
Mana ana m ege ihe niile
Haha kpọrọ? Ichoro kam wepu nkata nke ikwuru aha m nu metal groups?
Obi ike, ezi post. Dị ka ị si kwuo, Nu metal na metal core metal enweghị ihe ọ bụla. Enweghikwa igwe glam (lee ekwenyeghi m na gi)
Ekele: RJ Dio enweela ọrụ ọpụrụiche tupu ya abanye na Sabbathbọchị Izu Ike ma si na otu egwu akpọrọ egwurugwu.
Banyere subgeno-metal dị arọ, m kwuru maka ndị na-aghọtaghị nke a, Judas Priest na Iron Maiden dị ka ndị isi okwu.
Aghọtara m na ọ bụghị ebumnuche gị ịme ọtụtụ ndepụta nke sub-Genres ebe ọ bụ na ị kpọghị sub-Genres dị ka ụlọ ọrụ mmepụta ihe (Ozi, White Zombie, Fearlọ Ọrụ Egwu, wdg) ma ọ bụ Mbibi-Metal ọkacha mmasị m (M na-atụ aro ka ị mụọ Nwunye Nwunye m, oge ochie nke Paradise Lost na Anathema, Candlemass, Esoteric, Thergothon) nke nwere ihe dị ka 4 ma ọ bụ 5 dị iche iche dị iche iche dị iche iche n'ime ya (usoro, mmiri, mbibi ọnwụ, olili ozu, wdg) )
Ọtụtụ na-ele Sabbathbọchị Izu Ike anya ka mbido mbibi mbụ (usoro-mbibi ka ọ dokwuo anya) ma ozugbo amaara ụdị a, ọ gaghị esiri ike ịghọta ihe kpatara ya. Ekwadoro m ọhụụ ọhụụ-Rome nke a kpọrọ Iron Man.
E nwere ndị agha dị n'ime igwe nke siri ike ịkọwa dịka Opeth dị mma nke na-agwakọta ihe nke ọnwụ, na-aga n'ihu ma na-akpali akpali.
Yiri ihe na Katatonia. Ndị agha na-amalite site na otu ụda, gafee nke ọzọ, laghachi na mmalite ha wee hapụ album nwere ụda niile nke ọrụ ha n'otu album ahụ ...
Well, adighizi m agwu m ... Ekele.
Ọfọn n'ezie !! Nwa agbogho na Judas !! Olee otú ị ga-esi hapụ ha? : Ma ọ bụ
Achọghị m nwa agbọghọ na Judas
Echere m echiche mgbe egwurugwu ọ gara na Black Sabbath.
Achọghị m ịnwe igwe eji eme ihe na enweghị m mmasị na ya ma ọlị, ọ dị ka elektrọnik na gita.
Industrial metal bụ metal na Tekno, dị ka ramstein, deathstars, gothminister wdg. Echere m na ị ga-ege ntị n'ihe niile, megide ọzọ dị iche iche music ị na-ege ntị ọzọ echiche ị ga-abịa na, ma ọ na-eme gị dị ka ọtụtụ ndị na-ide mgbe niile otu ihe, ahem ac dc ka ima atu.
Anụla m Rammstein, ha yikwara m electro na guitar.
Nweghị ike ige ntị n'ihe niile n'ihi na ọ gaghị ekwe m omume ịmasị ụdị niile.
Ee ee, ị ga - ede otu ihe otu, otu enweghị ike ire onwe ya, dị ka Na ọkụ ma ọ bụ chọọ ikpuchi ụdị niile n'ihi:
1: Ọ gaghị ekwe omume
2: O bu site n’enweghi odidi
Ndị ukwu nke La Guiarra
Paul Gilbert anụbeghị ihe ọ bụla n'agbanyeghị na nwa okorobịa ahụ bụ onye ọbịa, MAB ka mma karịa mana anụbeghị m ihe ọ bụla
Eric Johnson, enweghị m mmasị n'ụdị egwu ahụ, dịka John 5, Yngwie kwesịrị nyocha
Jimmy Page dị ka ọ bụ nnukwu ngwugwu n'anya m, na mgbakwunye, ọ bụrụ na enwere otu na enweghị m ike iguzo ya bụ Led Zeppelin
Ndewo, Obi ike. N’eziokwu, a gụbeghị m edemede gị; Naanị m na-ele ya anya n'ihi na anaghị m achọ igwe. Agbanyeghị, ọ naghị enye m nsogbu, ma ya fọdụ na ọ nọ ebe a.
Nsogbu bụ na ugbu a, ndị edemede ndị ọzọ nwere ike ịchọ ime akụkụ nke atọ na-ekwu maka "reggaeton" na ụdị egwu ndị ọzọ (ọ bụrụ na ị nwere ike ịkpọ ya) na, n'adịghị ka igwe, mee nsogbu ma chụpụ m.
Ọfọn, enweghị ụzọ, ọ bụrụ na nke ahụ emee, ọ bụ naanị gị ga-ata ụta. Heh heh
Ọ dịghị mmadụ mba, ihe ọjọọ bụ kama Tina maka ime akụkụ 1 hehe
Na-agba ohia? uu
Mgbe m guruchara ihe niile, achọrọ m ịgwa gị otu ihe.
Ndepụta ahụ bụ otu dị iche iche na ọ masịrị m, ọ bụghị ndị na-ewepụta ụdị ọla ma ọ bụ okwute ọ bụla.
Ọ bụ na m na-ahụ otu okwu ahụ ugboro ugboro ma agaghị m etinye otu na-anaghị amasị m.
Tọ agba, egwu na ụmụ nwanyị.
Gini mere unu ji ese okwu banyere ihe uto? Ọ bụrụ na nke ahụ bụ nke ọ bụla?
Zuo ike !!!
Ọ na-akpasu m iwe na ha kwuru na mkpụrụedemede igwe enweghị isi Nwere ike ịsị na ị nweghị mmasị na ha, mana site na ebe ahụ gaa na ha enweghị isi na abis dị
N'ezie maka ụmụ nwanyị na-amasị m, echere m na egwu kachasị yiri nke ị kpọrọ aha m nụrụ bụ Pink Floyd
ebe m nwere uto ndi ozo
Firefox 11 ga-adị na elekere ole na ole
Ntuli aka: Kedu nke ka mma: GNOME, KDE, wdg?